DAAWO: Maxay ka wada hadleen RW Soomaaliya & M/weynaha Faransiiska, kulan gaar ah?
PARIS(P-TIMES) – Ra`iisulwasaaraha dawladda Faderaalka Soomaaliya Xassan Cali Kheyre oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Faransiiska ayaa qasriga madaxtooyada ee dalkaas kulan gaar ah kula yeeshay Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macroon, waxaana kulanka labada dhinac looga wada hadlay xaaladdaha iskaashiga labada dal.
Sida ay tabisay warbaahinta dalka Faransiiska, Soomaaliya ayaa u soo gudbisay dalka Faransiiska baahideeda ku aadan tababarada ciidamada Xoogga dalka, gaar ahaana kuwa Badda iyo in ay France gacan siiso sidii uu dalku cagihiisa iskugu taagi lahaa.
Raysalwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa u sheegay madaxda Faransiiska in uu dalkiisu u baahan yahay iskaashi iyo gacan walaalnimo oo waqtigan loo fidiyo, wuxuuna sheegay in ay kasoo kabanayaan dagaalo iyo burbur ay wado dheer ku jireen.
Dibu habeynta adeegyada dawliga ah ayuu sheegay in ay hadda wadaan oo ay meel wanaagsan soo gaarsiiyeen, sidaas oo kale geedi socodka maalgashiga dalka ayuu sheegay in ay hadda wadaan xili ay wajahayaan caqabado kala duwan oo leh saameyntooda.
Muuqaal lagu baahiyey barta gaarka ah ee Xaafiiska Raysalwasaaraha Soomaaliya ayuu ka muuqanayaa Madaxweyne Macron oo guriga dalka Faransiiska looga taliyo kusoo dhaweynayo, Wasiirka koowaad ee Xukuumadda Faderaaliga ah ee Soomaaliya Xassan Cali Kheyre.
Raysalwasaaraha Soomaaliya ayaa kaga qeybgalaya dalka Faransiiska shir gaar ah oo lagu casumay dawladda Soomaaliya iyo wadamada Afrika badankood oo ay madax badan iskugu imaan doonaan.